ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ဝေါဟာရ) - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၏ ဝေါဟာရ အခန်းသည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုရန် ခက်ခဲသည့် ဝေါဟာရများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
၃ IMPORTANT: Admin activity review
၄ Naming convention (Japanese)
၅ File Upload Wizard/Article Wizard
၆ "မြောက်"များ မြောက်မြားနေခြင်း
၈ Korean family names
၉ Federation နှင့် Unity တို့ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဖို့ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် ဝိရောဓိဖြစ်နေခြင်း
ဘိက္ခုနီ ပါဠိစကားလုံးကို မြန်မာလိုပြန်လည်ရေးသားရာမှာ "ရဟန်းမိန်းမ" ဆိုတာထက် "ရဟန်းမ" လို့ပဲ လက်ရှိအနေအထားအရသုံးသင့်သည်ဟု အကြံပြုချင်ပါသည်။ ခေတ်ရွှေ့ရှားလာတာနဲ့ စကားတွေက အသံထွက်၊ အဓိပ္ပာယ်တွေလည်း အများကြီးရွေ့လာပါတယ်။ "ရဟန်းမိန်းမ" က မှားသည်ဟုမဆိုသာသော်လည်း မပြတ်သားသောအနက် (ဒွိဟအနက် - ambiguous) ဖြစ်တတ်လို့ အနက်တစ်ခုတည်းထင်ပေါ်မယ့် "ရဟန်းမ" ဆိုတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ suggestion ပါ။ Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၇:၃၁၊ ၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာအဘိဓာန်မှာလဲ "ရဟန်းမ" လို့ပဲ ပြပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၄၈၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပိဋကတ်မြန်မာပြန်တွေမှာက "ရဟန်းမိန်းမ" လို့ပဲ ဘာသာပြန်ထားတာ တွေ့ပါတယ်။ အခြားဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေမှာလည်း "ရဟန်းမိန်းမ" လို့ပဲ သုံးကြပါတယ်။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၂၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရှေးနန်းတွင်းခေတ်များ၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် ... စတာတွေမှာ ပညာရှင် စာရေးဆရာ ရဟန်း/လူတွေရဲ့ စာလုံးပေါင်းက အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာ စာလုံးတွေတစ်ညီတည်းဖြစ်အောင် မြန်မာစာအဖွဲ့က (ပြင်ပရဟန်းရှင်လူအကူအညီ) များနဲ့ သတ်မှတ်တာခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ စာစုံအောင်မဖတ်ဖူးသော်လည်း ရဟန်းမိန်းမ / ရဟန်းမ နှစ်မျိုးစလုံးကို အထင်ကရ စာပေတွေမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ရဟန်းမိန်းမ က မမှားပါဘူး ပိဋကတ်မြန်မာပြန်ကျမ်းတွေမှာ ပိုသုံးကြပါတယ်။ မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ကိုယ်တိုင် မဟာဗုဒ္ဓဝင် မှာ နှစ်မျိုးလုံးသုံးစွဲပါတယ်။ဇာချဲ့ရရင် ဂျပန်ကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးအချို့ မိန်းမယူကြတော့ ထိုအမျိုးသမီးတွေကို ရဟန်းမိန်းမ လို့လဲသုံးနိုင်ကြတယ် ဟီး ;) ။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာအဘိဓာန်က တစ်မျိုးတည်း ပေးသွားတာလားမသိ။ တစ်ညီတည်း ပိုတိတိကျကျဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။ Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၁၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
တစ်ညီတည်းဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်။ ဘယ်တစ်ခုကို အတည်ယူရမလဲဆိုတာကျတော့ နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်မှ ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၁:၂၄၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"abc abc abc ဖြစ်၏ ။" နဲ့ "abc abc abc ဖြစ်၏။" မှာ ပုဒ်မကို ခွာရေးသလား သို့ ပူးရေးသလား မသိဘူး။ ကျောင်းတုန်းက ခွာပြီးမှ ပုဒ်မ တပ်တာ၊ ခု Bot တစ်ခုက ပူးပြီး တပ်တာဖြစ်လို့ ဘယ်ဟာမှန်လဲ မသိလို့ သိရှိသူများ ဖြေပေးပါရန် :) ။ Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၉:၅၂၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ခွာရေး/ပူးရေး အနေနဲ့ သတ်မှတ်ချက် မရှိဘူးထင်တာပဲ။ သေချာတော့မသိ။ ပုဒ်မအကြောင်းနည်းနည်းရှာဖတ်ကြည့်တာတော့ အဲလိုမတွေ့မိဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ရေးရင်တော့ ပူးရေးတာချည်းပဲ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၄၅၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပုဒ်ထီး ပုဒ်မ ပုဒ်ကလေး အားလုံး ရှေ့စာလုံးနဲ့ ပူးနေရမှာပါ။ ပြီးရင် စပေ့ တကွက်ခြား နောက်ဝါကျတကြောင်းစ။ အင်္ဂလိပ်မှာ ပုံစံ ကြည့်။ စပေ့ တကွက်ခြားတာက အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ကိုရီးယားမှာ တွေ့တယ်။ စပေ့မခြားတာက တရုတ်၊ ဂျပန်မှာ တွေ့တယ်။ ဘာသာစကားအားလုံးမှာ တူညီချက်က ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မ အားလုံး ရှေ့စာလုံးနဲ့ ပူးနေရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၅:၄၂၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
IMPORTANT: Admin activity review[ပြင်ဆင်ရန်]
However, if you asacommunity would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already haveapolicy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, --علاء (ဆွေးနွေး) ၁၈:၂၄၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း သုံးစွဲရန်)
Naming convention (Japanese)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ နာမည်ကို မျိုးရိုးနာမည် အရင်ရေးရလား၊ ကိုယ်ပိုင်နာမည် အရင်ရေးရလားဗျ။ enwiki မှာ en:Taishi Nakagawa ဆိုပြီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်အရင်ရေးတာတွေ့ရပေမဲ့၊ jawiki မှာကျ jp:中川大志 (俳優) (= Nakagawa Taishi) ဆိုပြီး မျိုးရိုးနာမည် အရင်ရေးတာတွေ့ရလို့ပါ။ Htanaungg (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၅၊ ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
en ကလိုပဲ အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာ en:Shinzo Abe ကို ရှင်ဇို အာ့ဘဲ့၊ ရှင်ဇိုအာဘေး စသဖြင့် မီဒီယာတွေမှာရေးကြပါတယ်။ Google မှာ အာဘေး ရှင်ဇို လို့ရှာရင်တောင် ရှင်ဇို အာဘေး အတွက်ပဲ အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၀၅၊ ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Ninjastrikers ဂျပန်မှာ တရုပ်လိုပဲ မျိုးရိုးကို အရင်ရေးတယ်. ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် အင်္ဂလိပ်ထုံးစံအတိုင်း မျိုးရိုးကို နောက်ကရေးတယ်. အင်္ဂလိပ်လို ရှင်ဇိုအာဘေး တွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ဂျပန်လိုရေးတဲ့အခါ အာဘေးရှင်ဇိုပဲ ရေးရမှာ. ဒီအကြောင်းနဲ့စပ်ပြီး ပြောရရင် မြန်မာတွေက ဂျပန်အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်က ယူယူရေးနေတာ. ဂျပန်ကနေ ယူရေးပြီး မျိုးရိုးနာမည် ရှေ့ကထားတဲ့သူ ပေါ်လာရင် ဘယ်လိုရှင်းမလဲ. P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၆၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
WP:COMMONNAME အရ ခိုင်လုံတဲ့ ရင်းမြစ်တွေကနေ ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်တဲ့ အသုံးများတဲ့အမည်ကိုသာ အသုံးပြုဖို့ ပိုမိုသင့်လျော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် BBC Burmese, Myanmar Times, Eleven စတဲ့ မီဒီယာကြီးတွေက သုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်း ယူထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေအရ (အခြားဘာသာစကားအမည်တွေကို ထောက်ပြထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာမရှိခဲ့ပေမယ့်) အင်္ဂလိပ်အမည်အတိုင်းခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်အမည်တွေကို မြန်မာလိုရေးရာမှာ အင်္ဂလိပ်ပုံစံရေးတာ အများစုဖြစ်နေရတာက စာရေး/စာဖတ်သူအများစုရဲ့ ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အများစုက မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ကိုတော့ အခြေခံကျွမ်းကျင်တတ်ကြတာမို့ မြန်မာဘာသာပြန်တဲ့အခါ ဂျပန်ကနေ တိုက်ရိုက်မယူဘဲ အင်္ဂလိပ်ကနေပဲ ယူကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အခြေအနေတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးရဲ့ ဂျပန်အမည် သုံးစွဲမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်သံအမတ် Ichiro Maruyama ကို မြန်မာလို မစ္စတာမာရုမာ အိချိရော လို့ ဖော်ပြသုံးစွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမည်ပေးစနစ် (ဂျပန်) ကို
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း)
ရွေးချယ်စရာ ၂ - "မျိုးရိုးအမည် ကိုယ်ပိုင်အမည်" (ဂျပန်အသုံးအတိုင်း)
ဘယ်လိုထားကြမလဲဆိုတာ ဝိုင်းဝန်းဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့။ နောက်ထပ် ထည့်စဉ်းစားပေးရမှာက WP:NAMINGCRITERIA မှာဖော်ပြထားတဲ့ "အရှိအတိုင်းဖြစ်ခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် စာဖတ်သူများအနေဖြင့် ရှာဖွေလေ့ရှိသည့် အမည်ဖြစ်ပြီး တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အမည်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ခေါင်းစဉ်မျိုးသည် မြန်မာဘာသာတွင် ခေါ်ဝေါ်သည့်အမည်အတိုင်း ဖြစ်လေ့ရှိသည်။" ဆိုတဲ့အတိုင်း စာဖတ်သူတွေ ရင်းနှီးပြီးသား၊ ရှာဖွေလေ့ရှိတဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၄၆၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အင်္ဂလိပ်မှာက မျိုးရိုးနာမည်ကို နောက်မှာ ထားလေ့ ရှိတာဆိုတော့ ဂျပန် မျိုးရိုးကို နောက်ပို့ပြီး သူတို့အတွက် မှတ်ရလွယ်အောင် ကမ္ဘာပြုတာပေါ့၊ ပတ်စ်ပို့တွေမှာလည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမဲ့ လက်မခံလို။ မြန်မာက ဒီစည်းမျဉ်းနဲ့ လွတ်ကျွတ်သင့်တယ်။ တရုတ် ဂျပန် ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုအတူတူပါ၊ တရုတ်မှာ မျိုးရိုး အရှေ့ထားရသလို၊ ဂျပန် ကိုရီးယားလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ မြန်မာဘာသာ ခေါ်ဝေါ်သည့်အမည်အတိုင်း ဖြစ်လေ့ ရှိခြင်း ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်ဇိုအာဘေးလို အသုံးများတာကို ပြန်ညွှန်းထားစေလို။ တသမတ်တည်းအနေနဲ့က အာရှတိုက် တတိုက်လုံးအနေနဲ့ မျိုးရိုး ရှေ့မှာထား အနောက်တိုင်းဆို မျိုးရိုး နောက်မှာထား နားအေးရော။ မျိုးရိုးမရှိတဲ့ နိုင်ငံလည်း အာရှတိုက်မှာ ရှိလိမ့်ဦးမယ်။ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၅:၂၆၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိုးနှစ်တွေလောက်တုန်းက သတင်းစာမှာ ဖတ်ရတာ ဂျပန်ဘက်က တရားဝင်ဌာနတွေကနေ နိုင်ငံခြားကို ပန်ကြားတာ ရှိတယ်။ သူတို့ပုံစံအတိုင်း မျိုးရိုး+အမည် ရေးပေးဖို့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားကမှ မလိုက်နာပါဘူး။ အခုအချိန်အထိ။ နိုင်ငံခြားသားတွေက အခုအချိန်အထိ အမည်+မျိုးရိုး ကို သုံးနေကြတုန်းပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တွင်ကျယ်လာခဲ့တဲ့ အသုံးတစ်ခုကို နိုင်ငံတစ်ခုက တရားဝင်စာထုတ်တောင်းဆိုတာတောင် ဘယ်သူမှ ပြန်မပြင်ပေးကြပါဘူး။ အသားကျပြီးသား အရာတစ်ခုကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၃:၀၇၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Pls discuss above and vote here. Htanaungg (ဆွေးနွေး) ၀၆:၀၄၊ ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Aungookingofcelestials, ခင်မောင်မောင်လွင်, your votes are welcome. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၃၀၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
vote ​ပေးမဲ့သူများ ကျန်ပါသေးလားဗျ။ ထပ် ping ရရင် canvassing ဖြစ်မှာစိုးလို့။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၃၅၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I've all noted with thanks. The result was to use Option 1. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၅၇၊ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၂ - "မျိုးရိုးအမည် ကိုယ်ပိုင်အမည်" (ဂျပန်အသုံးအတိုင်း) Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၆:၁၄၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၂ - "မျိုးရိုးအမည် ကိုယ်ပိုင်အမည်" (ဂျပန်အသုံးအတိုင်း) ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၆:၅၆၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း)ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၃:၀၇၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း) မီဒီယာတွေကလဲ ဒီအတိုင်းသုံးနေတော့ မျိုးရိုးရှေ့ထားတာ ဒီမှာပဲသုံးရင် ကြောင်မယ်ထင် P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၀၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း) Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၅:၄၈၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရွေးချယ်စရာ ၁ - "ကိုယ်ပိုင်အမည် မျိုးရိုးအမည်" (အင်္ဂလိပ်အသုံးအတိုင်း) Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၉၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
File Upload Wizard/Article Wizard[ပြင်ဆင်ရန်]
အသုံးပြုသူတွေ၊ လူသစ်တွေ အဆင်ပြေအောင် File upload wizard နဲ့ article wizard တွေ လုပ်ဖို့ပြင်နေတာရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် FUW ကို ဝီကီပီးဒီးယား:File Upload Wizard/sandbox မှာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပြဿနာက wizard စာလုံးကို မြန်မာလိုဆီလျော်အောင် ပြန်ဖို့ခက်နေတာပါ။ အရင်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ AW ကို "အလိုအလျောက် ဆောင်းပါးဖန်တီးသည့် ဝိဇတ်" ဆိုပြီး သုံးခဲ့တာတော့ရှိတယ်။ သူနဲ့လိုက်ဖက်အောင် FUW ကျ "ဖိုင်တင်သည့် ဝိဇတ်" လို့သုံးရင်ရပေမယ့် မသိတဲ့သူကျ ဝိဇတ်ဆိုတာ ဘာကြီးလဲ ဆိုပြီး ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက် FUW နဲ့ AW အတွက် ဆီလျော်မယ့် အသုံးအနှုန်းလေး စဉ်းစားမိတာရှိရင် အကြံပြုပေးကြပါဦး။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၃၄၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
iAbidan မှာ wizard ကို ဝိဇ္ဇာ လို့ ​ပြ​ောထားတာ တွေ့တယ်ဗျ။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၃:၀၉၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးဝိဇ္ဇာ/ ဖိုင်တင်ဝိဇ္ဇာ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၁၃၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အပ်ချလောင်း လို့ ပြန်ပါ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၅:၂၉၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အင်္ဂလိပ် ဝိဇာတ်ကို မစဉ်းစားဘဲ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပဲ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် လမ်းညွှန် လိုအပ်ချက် ကိရိယာ အကူအညီ အဲထဲက တခုခု အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ တလက်စတည်း အကြံပြုချင်တာက ကဏ္ဍ အစုမှာ ၁ ကဏ္ဍ ၅ စာမျက်နှာ အဲလို မဟုတ်ဘဲ အတိုကောက် ၁ ဍ, ၅ နှာ လို့ သုံးစေချင်ပါတယ်။ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၅:၄၈၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
iAbidan ကို ခိုင်လုံတဲ့ရင်းမြစ်လို့ မထင်. Wizard ရဲ့ မူလအလုပ်လုပ်ပုံက ဟယ်ရီပေါ်တာကလို မှော်နှင်တံနဲ့ လုပ်တာဖြစ်လို့ မှော်ဆရာပဲ ဖြစ်ရမှာ. ကွန်ပျူတာဘက်မှာ သုံးတာက သုံးတဲ့သူဟာ နောက်ခံကိစ္စတွေ သိစရာမလိုပဲ အရေးကြီးတာတွေပဲ GUI က ထဲ့ပေးရုံနဲ့ အဆင်သင့် (အပေါ်ကပြောသလို "အပ်ချလောင်း") ရသွားတာဖြစ်လို့ မှော်ဆရာ ဖြစ်သင့်တယ်. P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၀၆:၁၆၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wizard (noun) 1. (in stories)aman with magic powers; 2.aperson who is especially good at something; 3. (computing)aprogram that makes it easy to use another program or performatask by giving youaseries of simple choices (OALD 10th edition) ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၀၄၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wizard - A help feature ofasoftware package that automates complex tasks by asking the useraseries of easy-to-answer questions. So goes the definition of Oxford English Dictionary. As suggested by bro Bhone.bm, I would like to combine two of his proposed phrases ကိရိယာ + အကူအညီ to become ကူညီကိရိယာ, or ကိရိယာ + လမ်းညွှန် to become လမ်းညွှန်ကိရိယာ. And လမ်းညွှန်မှော်ဆရာ (literally) might bealovable phrase, as expressed by bro P0rnytail. အလိုအလျောက်ကိရိယာ would beapossible term, although I am not too sure about the function of wizard here; poor me. just suggestion! Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၄၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးလမ်းညွှန်မှော်ဆရာ နဲ့ ဖိုင်တင်လမ်းညွှန်မှော်ဆရာ လို့သုံးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၃၈၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာ ဖလှယ် တော်တော်ကို ရှည်ထွက်လာသလားလို့ပါ။ ဆောင်းပါးလမ်းညွှန်။ ဖိုင်တင်လမ်းညွှန်၊ ဆောင်းပါးမှော်ဆရာ၊ ဖိုင်တင်မှော်ဆရာ ဆိုပြီး ကျစ်ကျစ်ပဲ သုံးကြပါလား။ ဝေါဟာရကို အသစ်တီထွင် သုံးစွဲ ပေးရမှာပါ။ ဒါမှ ဝေါဟာရ တိုးပွားလာမှာ။ အဲဒါ ဝေါဟာရတွေကို ဖွင့်ဆို ရှင်းပြနေဖို့ မဟုတ်ပါ။ ဒါတွေက သုံးစွဲသူတွေက နားလည်အောင် ကွကို လေ့လာရမှာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဝိဇတ်ထဲ ဝင်လိုက်ရင် သူ့ကို တခါ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို ရှင်းပြကြဦးမှာပဲမလား။ နောက်ဆုံး ဝိဇတ်ပဲ သုံးကြပါလား။ အထဲမှာ ပြန်ရှင်းပြရင် ရတာပဲ။ ဝေါဟာရ ကြွယ်တာပေါ့။ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၀၇:၀၆၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးလမ်းညွှန်ကိရိယာ၊ ဖိုင်တင်လမ်းညွှန်ကိရိယာ၊ ဆောင်းပါးလမ်းညွှန်အကူအညီ၊ ဖိုင်တင်လမ်းညွှန်အကူအညီ။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကို ပြောရရင် မှော်ဆရာတွေ၊ ဝိဇ္ဇာတွေကို သဘောမကျပါဘူး။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၂၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဓိပ္ပာယ်လဲမလွဲအောင်ဆိုရင် ဆောင်းပါးကူညီကိရိယာ နဲ့ ဖိုင်တင်ကူညီကိရိယာ လို့ သုံးတာပဲ ပိုကောင်းမယ်ထင်။ လမ်းညွှန်တာတော့ပါပေမယ့် ဒီနေရာမှာကျ လမ်းညွှန်တာတင်မက ကိရိယာကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၁၉၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မဟာရာဇဝင်ကြီးက စကားလုံးတွေတွေ့လို့ သတိရပြီး ပြောတာပါ. မင်းခေါင်နောက်ကလူကို ဒုတိယမင်းခေါင် ခေါ်ပါတယ်. အလားတူပဲ သီပေါမင်းကို မန္တလေးရတနာပုံ ဒုတိယ မြို့တည်နန်းတည်မင်း ခေါ်ပါတယ်. အဲဒီ့ ပထမ ဒုတိယ တတိယဆိုတာတွေဟာ နောက်မှာ "မြောက်" တို့ "ကြိမ်မြောက်" တို့ "အကြိမ်မြောက်" တို့ ထဲ့စရာမလိုကြောင်း သိထားပါတယ်. သို့ပေမဲ့ ဝီကီမှာ အင်္ဂလိပ်နာမည်အများစုကို ပဉ္စမမြောက်ဂျော့ဘုရင်၊ တတိယမြောက် ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ... အစည်းအဝေး ဆိုတာတွေ တွေ့ရပါတယ်. ဒါမျိုးတွေ bot နဲ့ပြင်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်. ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုပဲ "မြောက်" "ကြိမ်မြောက်" တွေ ဆက်သုံးမှာလား သိချင်တယ်. ဒီမှာက ထစ်ခနဲရှိ မြန်မာစာအဖွဲ့ မြန်မာစာအဖွဲ့ ညွှန်းတော့ ဒီတခုရော မြန်မာစာအဖွဲ့သဘောအတိုင်း လုပ်မလား သိချင်တာ :3 P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၂:၃၁၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြောက် က အစဉ်ပြပစ္စည်း အနေနဲ့ အပို ထည့်သုံးကြတယ်ထင်တယ်။ အပြင်က ဟိုနေရာ ဒီနေရာတွေမှာလည်း မြင်နေကျပဲ၊၊ မြန်မာစွယ်စုံကျမ်းမှာ ဒုတိယဂျော့ တတိယဂျော့ လို့ပဲရေးကြပါတယ်။ တစ်မူတည်းရှေ့နောက် ကိုက်ညီရင်တော့ကောင်းမှာပါ။ Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၄:၄၆၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘွဲ့၊ နာမည်တွေမှာ မြောက်/ကြိမ်မြောက်မပါဘဲ ရေးတာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၁၉၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြောက်တွေမပါတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ NayiMuu® talk ၀၀:၀၂၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘာသာစကားဆိုတာ လူဖန်တီးထားတဲ့ အမှောင်ခေတ်မတိုင်မီ ဟိုးရှေ့အစောပိုင်းကတည်းက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊
ယနေ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ ဘာသာစကားနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းကြောင်းတွေအားလုံးဟာ ဘာသာစကားတခုအရ ယနေ့လူသားတွေ နားလည်ထားသိရှိမှု၊ ဘာသာစကားအရမဟုတ်ပဲ ယနေ့လူသားတွေ အလွယ်တကူ မသိနိုင်တဲ့ ပြင်ပလောက တကယ့်အမှန်တရား ဖြစ်ရပ်တွေအားလုံးကို အခု ဒီနေရာကနေ စတင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းနဲစရာဘဲ. ဒီမှာ ဆွေးနွေးလို့ မရဘာ :3 P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၁:၅၀၊ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Korean family names[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုရီးယားမျိုးရိုးအမည်တွေမှာ Kim, Kang, Park, Choi, Song, Jung က အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်ဆိုရင် ဂင်၊ ဂန်၊ ဘတ်၊ ချွဲ၊ ဆုန်း၊ ​ဂျောင် ဖြစ်ရမှာကို အတော်လေး မှားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် Kim နဲ့ Park မှာ ကင်၊ ပတ် ဖြစ်နေ။) အဲဟာတွေ တွေ့မိသလောက် လိုက်ပြင်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိလို့ပါ။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၂၀၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဲဒါဆို ယူတာမှားနေပြီ. Baek ကို Park. Yee ကို Lee. Gim ကို Kim ရေးတာ ကိုရီးယားတွေကိုယ်တိုင် ရေးတာ. IG မှာ ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်. P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၂:၂၄၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဲဒါဟုတ်တယ်လေ၊ Romanization system ကို မှားပါတယ်လို့ ​ပြောမိလို့လား။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၁၃:၃၂၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
လိုက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ ပြောတာ. အသုံးများတာ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေသ ရှိတယ်မှတ်လား P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၇၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Kim, Kang ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်က ဂင်၊ ဂန် မဟုတ်ဘူး။ ကင်၊ သို့ ခင်၊ ကန် သို့ ခန် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကလည်း အစသံ မို့ ဖြစ်တယ်။ ဒုသံက စပြီး ဂသံ ပြောင်းထွက်ရတာ ဖြစ်တယ်။ 김 ဆိုတဲ့ အက္ခရာကပဲ မပြောင်းဘဲ နေတာ ဖြစ်တယ်။ Bhone d(^o^)b¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸BM «☎» ၁၄:၂၇၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘာမှဆက်ပြောစရာမရှိလောက်အောင် ဆွံ့အ။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၂:၂၆၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အနီးဆုံးအသံထွက်ကို ယူရေးတဲ့အခါ "ဆောင်းဟေကို" ကို "ဆုန်းဟဲဂယို" လို့ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အသံထွက်အတိအကျနဲ့ လာရှာဖို့ဆိုတာ အတော်လေးရှားမှပါ။ မြန်မာ့လျှာ မြန်မာ့အာနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားနာမည် ဆောင်းဟေကို ကိုပဲ ရှာကြဖို့ များပါတယ်။ (Google search result နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်) ဒါကြောင့် ရင်းနှီးနေပြီးသား မှတ်မိလွယ်တဲ့နာမည်ကို ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့မဟုတ်တောင် ပြန်ညွှန်းအနေနဲ့ ထားသင့်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၅:၀၈၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
That makes sense. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၂:၂၆၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Federation နှင့် Unity တို့ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဖို့ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် ဝိရောဓိဖြစ်နေခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျန်ုပ်သည် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို စတင်အသုံးပြုသည်မှာ မကြာသေးပါ ၊ သူငယ်နှပ်စားအဆင့်ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ https://en.wikipedia.org/wiki/Politics#State အကြောင်းကို https://my.wikipedia.org/wiki/နိုင်ငံရေး တွင် ဘာသာပြန်ဆိုနေသူလည်း ဖြစ်ပါသည် ။ အောက်ပါ အခြင်းအရာသည် ကျန်ုပ်၏ ဘာသာပြန်ဆိုမှုအား အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေနေသော အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။
Federation ဆိုသည်မှာ သီးခြားသော ဒေသအုပ်ချုပ်သူများက ဗဟိုအစိုးရအောက်ကနေ တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိနေခြင်းလို့ https://en.wikipedia.org/wiki/Federation Federation အကြောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ဖွင့်ဆိုထားပြီး Unity ဆိုသည်မှာ အစိုးရပုံစံတစ်ခုတည်းရှိသော ဗဟိုအစိုးရက ဌာနခွဲများထားပြီး အုပ်ချုပ်ခြင်းဟု https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state အကြောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
သို့သော် https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state အကြောင်း၏ မြန်မာစာကဏ္ဍတွင် https://my.wikipedia.org/wiki/ပြည်ထောင်စုစနစ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ကျန်ုပ်၏ အကြောင်းအရာသိမြင်မှုနှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက ဒေသအစိုးရသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့်အတူ ပေါင်းစည်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းကို ပြည်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်သိမြင်ခြင်းသည် ဆီလျော်ပြီး တစ်ခုတည်းသော အစိုးရရှိသည့် ဗဟိုအစိုးရအောက်မှ ဌာနများခွဲ၍ အုပ်ချုပ်ခြင်းကို တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ဟု သတ်မှတ်သိမြင်ရခြင်းသည် ဆီလျော်သည်ဟု တွေးထင်မိသည် ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှ မိတ်ဆွေမောင်နှမတို့အား Federation နှင့် Unity ကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မည်သည့်စကားလုံးသည် အများအမြင်တွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟု ထင်မြင်သလဲကို ဆွေး‌နွေးဝေဖန်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state အား https://my.wikipedia.org/wiki/ပြည်ထောင်စုစနစ် ဟု ပြန်ဆိုရေးသားထားခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်အရ ဆီလျော်သည်ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ။ ထိုမှသာ ကျန်ုပ်၏ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းတွင် ဒွိဟဖြစ်နေသော အခက်အခဲကို ပြေလည်စေနိုင်၍ ဖြစ်ပါသည် ။ ??? SDG Hidgeright
Pinging @Albert Poliakoff:, @Pho Sai:, @Aungookingofcelestials:, @Dr Lotus Black:, any ideas? Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၁၇၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာဘာသာစကားမှာ "ပြည်ထောင်စု" စကားလုံးမဟုတ်တဲ့ "ပြည်ထောင်စု" ကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ်စေသော အလားသဏ္ဍာန်တူ တခြားအသုံးအနှုန်းဝေါဟာရ ရှိသေးလားမသိဘူး။ ဒီစကားလုံးမျိုးတွေကြတော့ Coinage လုပ်လို့မကောင်းဘူးလေ။ ရုံးသုံး၊ သံတမန်သုံးဝေါဟာရတွေ နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပြီးမှ ဆွေးနွေးကြရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ @SDG Hidgeright, @Ninjastrikers, @Dr Lotus Black, @Aungookingofcelestials။ Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၅၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
User:Ninjastrikers မြန်မာဘာသာစကားသည် ရှုပ်ထွေးမှုများရှိနိုင်သည်ကို နားလည်ပါသည်။ အကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၌ သေသေချာချာ လေ့လာသင်ယူမှု (formal education) မရှိသည်ကို ဦးစွာပြောကြားအပ်ပါသည်။ သို့သော် အကျွန်ုပ်၏ အမြင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး သိမြင်အောင်ဖော်ပြသွားမည်။
https://en.wikipedia.org/wiki/Federation တွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ထက် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများနှင့် ထိုနိုင်ငံများတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို မည်သို့ကျင့်သုံးပုံကို ဖော်ပြထားသည်ကို သိရှိရပါသည်။ https://en.wikipedia.org/wiki/Federalism တွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အကျယ်ချဲ့ရှင်းပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ https://my.wikipedia.org/wiki/ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် သည် Federalism ဆောင်းပါး၏ ဘာသာပြန်လည်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ https://en.wikipedia.org/wiki/Federation အတွက် ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးအမည်ကို ဖက်ဒရေးရှင်း သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ ဟုခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။
https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state တွင်မူ "ပြည်ထောင်စုစနစ်" ၏ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မှာ တိုတောင်းသဖြင့် ပြည်ထောင်စနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများကိုပါ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးဖြစ်သော https://my.wikipedia.org/wiki/ပြည်ထောင်စုစနစ် ကို ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဟူ၍ အမည်ပြောင်းအပ်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ: ပြည်ထောင်စု–ဖက်ဒရယ် စနစ်များပြရာဇယား
ဤဇယားကိုအခြေခံ၍ အကျွန်ုပ်သည် ယေဘုယျအ‌ခြေအနေရပ်များကို ဖော်ပြသွားပါမည်။
* One large unitary state – တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်ပြည်ထောင်
* Decentralisation – အစိုးရအတွင်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချပေးခြင်း
* Devolution – အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများအား အာဏာအနည်းငယ်ခွဲဝေမှု
* Federal state – ပြည်နယ်အစိုးရများ ရှိသော်လည်း ဗဟိုအစိုးရမှသာ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း
* Federal Union of States – ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရအကြား တူညီသောအာဏာများရှိခြင်း
* Confederation – ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဆင်တူသော်လည်း ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာမှာ ပို၍နည်းခြင်း
* Many small separate states – တစ်သီးတစ်ခြားနိုင်ငံငယ်များ
အားလုံးနားလည်ပါမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၄:၂၉၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ် အသုံးအနှုန်းများကို အကျွမ်းတဝင် နားလည်မှု မရှိသော်လည်း @Albert Poliakoff ၏ ဆွေးနွေးချက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်ခြုံငုံမိသည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် တည်းဖြတ်သူ @SDG Hidgeright အား ဒွိဟဖြစ်စေသည့် ပြည်ထောင်စုစနစ် ဆောင်းပါးအား အများသဘောဖြင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဟူ၍ ပြောင်းလဲရန် ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောတူလက်ခံပါသည်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၉:၂၃၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မိမိလည်း အကြမ်းဖျင်း သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဆောင်းပါးအနေဖြင့် ဆိုရင်တော့ "ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်" လို့ သုံးတာ ပိုပြီး စာပေဟန် ဆန်စေမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ် ခင်ဗျာ။ အများသဘောထားကို ပိုအလေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင့် ။ Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၁၀:၃၆၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၁၀:၃၆၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အသုံးပြုသူ@Pho Sai@Albert Poliakoffတို့ခင်ဗျာ
Unit‌ary State ဆိုသည်ကို ကျနော်ဒွိဟဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာက (မြန်မာပြည်နှင့် ယှဥ်၍) "တစ်ပြည်ထောင်? (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စု?"ဆိုသည့် စကားဖြစ်ပါသည် ။ State အား ဘာသာပြန်ဆိုပါက"စနစ်" မဟုတ်ဘဲ "နိုင်ငံ"ဖြစ်သင့်သည် ဟူသည်ကို ကျနော်မေ့လျော့သွားခဲ့ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် လိုအပ်ချက်ရှိက ခွင့်လွှတ်ပါ။
Unit‌ary State ကို ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဟု‌ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ကြလျှင် Federal state ဆိုသည်ကို ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ် (သို့မဟုတ်က) ရုရှားကဲ့သို့ ဖယ်ဒရယ်‌‌ရေးရှင်းနိုင်ငံအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုသင့်ပါသလား ?
လတ်တလော ဘာသာပြန်ဆဲတွင် ကျနော်က federal state ကို "ဖယ်ဒရယ်(ပြည်ထောင်စု)နိုင်ငံ"ဟု အကြမ်းဖျဥ်း ပြန်ဆိုထားပါသည် ။ Unit‌ary State ကိုတော့ ပြည်ထောင်စုဟု ရေး‌မည်ု အကြံပြုကြပါသလား ("ပြည်ထောင်စု/တစ်ပြည်ထောင်"ဟု စိတ်ကူးထားပေမယ့် စကားလုံးမဖောင်းပွဖို့နဲ့ တိုရင်းလိုရှင်း အနက်ထင်းဖို့လည်း စိတ်ကူးရှိပါသည်။) SDG Hidgeright (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၀၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Albert Poliakoff ၊ ခုရေးသားသော စာသားသည် မည်သည့်ကိစ္စနှင့်မျှ မပတ်သက်ကြောင်း ဦးစွာပလ္လင်ခံပါရစေ။ “Unitary” က ပြောရရင် “ပြည်ထောင်” တွေ “စု”တဲ့ အဆင့်လို့ မမြင်မိပါဘူး၊ တစ်စုံတစ်ရာက တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးထင်ဟပ်နေတယ် မြင်မိပါတယ်။ “Federal” ကြတော့ တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်မို့လို့ စုစည်းမိကြတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ်ပါတယ်။ ခက်တာက “ပြည်ထောင်စု” ကို မြန်မာ-မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သလဲ ဆိုတာပေါ်ပဲ မူတည်မယ် ထင်ပါတယ်။ Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၁၅:၀၀၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အသုံးပြုသူက နိုင်ငံတော်ဆိုရင် စာ‌ပေဟန် ဆန်တယ်ဟု ဆိုရာတွင် ကျနော့်အဖို့ နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ စကားကြားတိုင်း ကိုယ်နှုတ်အမူအရာကို သတိကြီးကြီးထားပြီး ဆင်ခြင်နေရပါတယ် 😅 ။ SDG Hidgeright (ဆွေးနွေး) ၁၄:၄၆၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@SDG Hidgeright။ 😅😁။ Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၁၅:၀၁၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ထိုဇယားက ကျနော့်ဘာသာပြန်တုန်းက နားလည်ဖို့ တော်‌ော် အကူအညီပေးခဲ့ပေမယ့် ထိုဇယားကပဲ အထက်က မေးခွန်းဖြစ်လာ‌ေတာပါဗျ ။ နှိုင်းယှဥ်သဘောအရ ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်နားသွားထားရမှန်း နားမလည်ခဲ့လို့ပါ။ SDG Hidgeright (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၅၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@SDG Hidgeright အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးမှာတော့ Federation နဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့အတွက် ဖက်ဒရေးရှင်း ကို ဦးစားပေးသင့်ပြီး ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ ကိုတော့ redirect လုပ်ဖို့ပဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ Unitary ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက် မြန်မာစကားမှာ သေသေချာချာ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စကားလုံးမရှိဘူး။ Union ဆိုတာနဲ့ "ပြည်ထောင်စု" ဆိုပြီးပြောလာကြတာလို့မြင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလဲ "Unitary System" ကို ကျင့်တော့ အဲ့စနစ်ကို "ပြည်ထောင်စုစနစ်" ဆိုပြီးခေါ်ကြလာတယ်လို့မြင်တယ်။ "ပြည်ထောင်စု" ရဲ့သဘောဟာ ပြည်ထောင်‌‌တွေကိုစုထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Unitary ဆိုရင် ပြည်ထောင်တွေကို တစ်ယောက်ယောက်က (အတင်း) စုစည်းထားတယ်လို့မြင်ဖို့ ၊ Federal ဆိုရင် ပြည်ထောင်တွေဟာ မိမိတို့သဘောအလျောက် စုစည်းတယ်လို့ မြင်ပေးရန် အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ "ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု" ဆိုတာကျတော့လည်း ပြည်ထောင်တွေဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ စုစည်းနေခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရတယ်။ ချုံပြောရရင်တော့ "Unitary=ပြည်ထောင်စု" ဆိုပြီး strictly မှတ်ယူလို့မရဘဲ context အလျောက်အဓိပ္ပာယ်ယူရမယ်လို့ပဲ ထင်မြင်ပါတယ်။Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၁၅:၀၈၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
စုတာတော့ စုတယ် ပုံစံမတူဘူးဆိုတာမျိုးလို့ ဆိုလိုရင်တေ့ နားလည်ပါပြီ။ SDG Hidgeright (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၂၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်_(ဝေါဟာရ)&oldid=717902" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။